Puntland – Page 18
April 19, 2019 puntlandnews 5
April 19, 2019 puntlandnews 3
Puntlandnews.net (Garoowe)-Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Mudane Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa warqad hanjabaad ah u soo diray madaxda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Warqaddaan qoraalka ah oo madaxda wasaaradda waxbarashada Puntland uu […]
April 19, 2019 puntlandnews 12
Puntlandnews.net (Nairobi)-Wararkii ugu dambeeyey ee shabakadda PN ka helayso caasimada dalka Imaaraadka ee Abu Dhabi ayaa sheegaya in xalay ay halkaas kulan ku yeeshen Madaxweynayaasha Somaliland iyo Puntland. Kulankaan dhexmaray madaxweyne Denni iyo Muuse Biixi […]
April 18, 2019 puntlandnews 0
Puntlandnews.net (Garoowe)-Xukuumadda Puntland ayaa jawaab rasmi ah ka bixisay hanjabaaddii uu wasiirka waxbarashada Soomaaliya u soo diray ardayda reer Puntland si ay u galaan imtixaanka ay qaaddo xukuumadda Soomaaliya. Agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada […]
April 18, 2019 puntlandnews 1
Xog hoose oo ay helayso warbaahinta qaar ayaa sheegaysa in qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyadda ay diideen in ay ka qeyb galaan Shirkii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay in uu Muqdisho […]
Shirkii Golaha Xukuumadda Dowladda Puntland oo uu Shir guddoominayey Madaxweyne ku-xigeenka Dowladda Puntland, Ahna Ku-simaha Madaxweynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa looga hadlay arrimaha amniga dalka, Aragtida Dowladda Puntland ee arrimaha imtixaanaadka shahaadiga ah, […]
Puntlandnews.net (Garoowe)-Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa digniin culus u diray waalidiinta iyo ardayda ku sugan deegaamada Puntland isagoona ugu goodiyey inaysan u saxiixi doonin shahaadada heer Federal. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in kadib […]
April 18, 2019 puntlandnews 4
Puntlandnews.net (Garoowe)-Gudoomiyeku xigeenka labaad ee Baarlamanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo hadal kooban bixiyey ayaa si adag uga jawaabey hanjabaaddii uu soo diray wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. “Puntland ayaa hogaamisa waxbarashada dalka xataa […]
April 18, 2019 puntlandnews 2
Puntlandnews.net (Garoowe)-Wasaaradda caddaaladda iyo arrimaha diinta dowladda Puntland ayaa soo saartay farriin ku wajahan bulshada kunool Puntland gaar ahaan dugsiyada quraanka kariimka ah. “Wasaaradda Caddaalada Arrimaha Diinta iyo dhaqancelinta Dowladda Puntland waxay macalimiinta dugsiyada quraanka […]
April 17, 2019 puntlandnews 0
Puntlandnews.net (Garoowe)-Xilli abaar baahsani ay kajirtey dhulka Soomaalida ayaa waxaa roobabkii gugu ay hadda ka hoorayaan deegaamo katirsan gobolada bari ee maamulka Somaliland. Deegaamada roobsaday ayaa waxaa kamid ah howdka iyo bariga gobolka Togdheer ee […]
April 17, 2019 puntlandnews 5
Wasiirkii hore ee Waxbarashada Puntland Abdi Farah Saeed (Juxa) ayaa jawaab adag siiyey wasiirka waxbarashada Soomaaliya wuxuuna yiri. Wasiir Godaxow, Puntland waa pre-federal state dhisan in kabadan 20 sano oo leh manhaj, imtixaan iyo siyaasad […]
April 17, 2019 puntlandnews 3
Puntlandnews.net (Garoowe)-Madaxweynaha dowladda Puntland Dr Siciid Cabdullaahi Denni ayaa looga fadhiyaa magacaabista taliska ugu sareeya ciidamada Daraawiishta dowladda Puntland oo dhowaan warqadda iscasilaadda u gudbiyey xafiiskiisa. Inkastoo ay muddo dheer ka soo wareegatey waqtigii uu […]
April 17, 2019 puntlandnews 6
Puntlanndews.net (Garoowe)-Wararkii ugu dambeeyey ee ay heshay Puntlandnews ayaa sheegaya in madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya ay shir kuyeelan doonaan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Xogta Puntlandnews heshay ayaa sheegaysa in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi […]
Puntlandnews.net (Garoowe)-Maamulka Shirkadda DP World ee gacanta ku haya dekadda Magaalada Berbera ayaa ka hadlay caqabado kusoo kordhay oo ka hor taagan ballaadhinta dekadda Berbera. Madaxweynaha Somaliland oo shalay ku sugnaa magaalada Berbera, isaga oo […]
April 17, 2019 puntlandnews 1
April 16, 2019 puntlandnews 0
April 16, 2019 puntlandnews 3